Thermometera 11 tsy misy mikasika tsara indrindra: Ny lisitra farany (2020) - Fahasalamana | Desambra 2021
Orinasa, Vaovao Vaovao, Wellness Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa Community, Company Fahasalamana Pets Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana News Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fialam-Boly Zava-Mahadomelina Vs. Namana
Tena >> Fahasalamana >> Thermometre 11 tsy misy mikasika tsara indrindra: ny lisitra faratamponao
Thermometre 11 tsy misy mikasika tsara indrindra: ny lisitra faratamponao
123RF (talantalana Jozef)
Ny fahaizana maka maripana marina avy lavitra dia tena zava-dehibe tokoa izao. Na mikasa ny hampiasa thermométer tsy misy mikasika ianao any amin'ireo orinasa ho an'ny mpiasa, ho an'ny mpianatra any am-pianarana, na eo amin'ny sehatry ny fitsaboana, na any an-trano fotsiny, dia ilaina ny manana thermometer tsy misy mikasika eo am-pelatanana. Ny ankamaroan'ny thermometre tsy misy mikasika dia sarany antonony, ho an'ny mpampiasa, ary manana fiasa tena mety.
Mividiana thermometatra tsy misy mikasika ny handrina eto.
Raha mikasa ny handefa ny zanakao hiverina any am-pianarana ianao amin'ity fararano ity dia te-hijery ity lahatsoratra ity amin'ny saron-tava tsara indrindra ho an'ny ankizy ianao.
Inona avy ireo thermometre tsy misy mikasika tsara indrindra amin'ny taona 2020?
Tsy misy fifandraisana mialoha ny loha sy ny thermometer amin'ny sofina Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Azo ampiasaina ho an'ny zazakely sy olon-dehibe
Famakiana haingana sy mora
Thermometer kilasy fihodinana misy fanairana fanaviana
Vidiny: $ 15.98 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
iHealth Thermometer aloha tsy mikasika Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Miasa tsara amin'ny tanjona kendrena
Vidiny: $ 19.99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Therperometatra mialoha ny fahaterahana Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Teknolojia sy famolavolana maoderina
Ny fitaovana marani-tsaina dia mandeha ho azy amin'ny telefaona
Vidiny: $ 42,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Thermometer infrared tsy mifandray Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Fampisehoana loko telo, miankina amin'ny temp
Mora sy haingana ampiasaina
Tena marina, nahazo isa be
Vidiny: $ 15,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
BLScode Thermometer Touchless ho an'ny olon-dehibe sy ankizy Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe na ankizy
Vidiny: 19,74 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Thermometre aloha tsy misy Touchhead ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Famakiana jiro mavo, mavo ary mena mora
Ny temp dia azo alaina amin'ny halavirana 5cm
Vidiny: $ 9.99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Tsy misy fifandraisana mialoha ny lohataona ho an'ny olon-dehibe Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Haingana sy mora ampiasaina
Mitahiry hatramin'ny hafanana 50
Vidiny: $ 12.99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Amplim Therlessometer tsy misy fikitika infrared Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mora ampiasaina sy vakiana
Tonga miaraka amin'ny batery
Fahaiza-mitahiry famakiana 32 farany
Vidiny: 29,98 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Tsy misy fifandraisana Thermometer Infrared Medical Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Fampitandremana azo henoina rehefa hita ny tazo
Azo ampiasaina ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
F-Doc tsy mifandray amin'ny alàlan'ny thermometer mialoha Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Haingana, mora ary marina
Afaka mandray mari-pana hatramin'ny 2,5 santimetatra
Mitahiry hatramin'ny 32 temps
Vidiny: $ 39.75 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Thermometre mialoha ny infrared ho an'ny olon-dehibe sy zazakely Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Azo ampiasaina amin'ny handrina na amin'ny sofina
Miasa ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
Tena marina sy mora ampiasaina
Ny hevitra tsy miangatra
1. Tsy misy fifandraisana mialoha ny loha sy ny thermometer amin'ny sofina
Vidiny: $ 15.98 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Azo ampiasaina ho an'ny zazakely sy olon-dehibe ary koa amin'ny handrina na sofina
Thermometatra kilasy fihomehezana miaraka amin'ny fanairana tazo rehefa hita ny hafanana ambony
Tsy misy tahiry fitadidiana
Bateria tsy tafiditra
Tokony ho ao anatin'ny iray santimetatra hamokarana famakiana marina
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity No contact Infrared Thermometer ity dia azo ampiasaina amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe ary manana safidy amin'ny famakiana ny handrina na ny sofina arakaraka ny safidinao. Ny thermometer dia novokarin'i Anthsania, orinasam-pitaovana ara-pahasalamana, ary efa nandalo fanamarinana mari-pahaizana momba ny fitaovana fitsaboana, izay mety ho an'ny fampiasana hopitaly. Ity thermométer ity dia manana fomba efatra samihafa (thermometre amin'ny handrina ho an'ny olon-dehibe, thermometre amin'ny handrina ho an'ny zaza / zaza, fomba thermometra amin'ny sofina, ary ny mari-pana thermometer amin'ny zavatra). Izy io koa dia manana fanairana fanaviana rehefa tsikaritra ny mari-pana ambony.
2. iHealth Thermometer Mandrosoa
Vidiny: $ 19.99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Mora ampiasaina amin'ny bokotra iray
Sensors telo ho an'ny famakiana marina
Miasa tsara amin'ny kendrena mihetsika, mahatonga azy ho tsara ho an'ny ankizy
Tsy misy tondro mena / maitso rehefa misy tazo
Tsy maintsy velomina sy vonoina eo anelanelan'ny vakiteny
Mila manakaiky ny handrina vao mahazo vakiteny
ny iHealth Thermometer aloha tsy mikasika miasa amin'ny fampiasana sensor telo hahazoana ny famakiana marina indrindra nefa tsy mila mikasika ny vatana. Ny thermometer dia miasa amin'ny fikitika tsotra ny bokotra iray, miaraka amina vibration izay ahafahanao mahafantatra fa vita ny famakiana. Ny mari-pana dia hita taratra nomerika amin'ny fampisehoana LED mora vakina. Mety tsara amin'ny ankizy izany satria afaka mamaky mari-pana marina na dia mihetsika aza ny tanjona.
3. Comper Smart Medical Mandrosoa Thermometer
Vidiny: $ 42,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Teknolojia sy famolavolana maoderina izay tsotra sy mirindra
Famakiana haingana sy mora ao anatin'ny iray segondra
Mila manakaiky ny handrina amin'ny famakiana marina
Tsy misy fanairana tazo amin'ny fitaovana tena izy
Tsy miaraka amin'ny bateria
Raha mitady thermometatra tsy misy mikasika ny handrina tsy voakitika kely ianao dia safidy tsara ity thermometer mahay ity. Izy io dia famolavolana maivana sy voafintina ary matevina vita amin'ny fitaovana azo antoka. Ny famakiana dia maharitra iray segondra, izay mety indrindra ho an'ny ankizy sy ny zaza tsy dia manam-paharetana ary manaparitaka ny mari-pana ho an'ny fampiharana ho mora idirana.
4. Thermometer infrared tsy mifandray
Vidiny: $ 15,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Fampisehoana loko telo, miankina amin'ny maripana
Mora sy haingana ampiasaina amin'ny fandidiana iray mikasika ary ny valiny faharoa
Ny bateria dia mila fanoloana sporadika
Tsy maintsy ao anaty 1-3cm amin'ny handrina
Ity Thermometer tsy misy fifandraisana tsy mifandray ity dia haingana sy mora ampiasaina, miaraka amina famakiana iray segondra ary fiasa bokotra iray tsotra. Mila ao anatin'ny 1-3cm amin'ny foto-kevitra ianao, fa ny thermométer no-touch no tsara indrindra hitandroana ny fahadiovana. Ny efijery LED dia manamora ny famakiana ny maripana, izay aseho eo anoloana indrindra amin'ny thermometer.
5. BLScode Thermometer Touchless ho an'ny olon-dehibe sy ankizy
Vidiny: 19,74 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Tena marina ary mampiseho loko hafainganam-pandeha hafa miorina raha misy tazo
Famakiana haingana ao anatin'ny iray segondra
Azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe na ankizy ary azo alaina amin'ny 8cm
Tsy mitazona ny lohan'ny mari-pana taloha
Azonao atao ny misoroka tanteraka ny fifandraisana amin'ny BLScode Touchless Thermometer ho an'ny olon-dehibe sy ankizy satria afaka hatramin'ny 8cm miala amin'ny handrina ianao ary mbola mahazo famakiana marina. Ny thermométer dia mamokatra haingana ao anatin'ny iray segondra ary misy miverina miverina loko, izay taratra loko hafa mifototra amin'ny raha misy tazo hita na tsia.
6. Thermometre aloha tsy misy Touch ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy
Vidiny: $ 9.99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Famakiana miloko mora arakaraka ny hamafin'ny tazo
Famolavolana maoderina sy marevaka ary tena avo tokoa
Ny temp dia azo alaina amin'ny halavirana 5cm ary mahatratra 35 ny temps azo tehirizina
Ny bateria dia mila soloina tsindraindray
Ny famakiana default dia ao amin'ny Celcius
izany thermometatra amin'ny handrina infrared ny iray segondra monja dia mamokatra famakiana ary tena marina. Ny loko telo dia manamora ny famakiana azy, miaraka amin'ny jiro maitso tsy misy mari-pana, jiro mavo ho an'ny mari-pana ambany ary jiro mena ho an'ny mari-pana ambony. Izy io dia manana endrika mirindra sy maoderina ary mihidy ho azy aorian'ny 15 segondra nefa tsy ampiasaina. Mitahiry mari-pana hatramin'ny 35 izy ary afaka mamaky na C na F. Ny mari-pana dia mety ho hatramin'ny 5 cm miala amin'ny handrina.
7. Tsy misy thermometer mialoha ny loholona ho an'ny olon-dehibe
Vidiny: $ 12.99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Haingana sy mora ampiasaina. Segondra vitsy monja no vakiana ary ny mari-pana dia azo alaina hatramin'ny 5 cm miala amin'ny handrina.
Mitahiry mari-pana hatramin'ny 50 azo alaina amin'ny fotoana rehetra
Azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe zaza
Ny bateria dia mila soloina matetika matetika
Mamitaka ny mifamadika eo anelanelan'ny C sy F
Modely lehibe kokoa fa tsy maoderina amin'ny famolavolana
izany thermometer tsy misy tohiny azo ampiasaina ho an'ny zazakely sy ny olon-dehibe ary isaina indrindra ary atoro azy. Ny elanelan'ny fahamendrehana dia tena marina ary safidy madio ara-pahadiovana satria ny famakiana dia azo atao hatramin'ny 5cm miala amin'ny handrina. Tehirizo ny famakiana hatramin'ny 50 izay mora azo rehefa ilaina izany. Ity thermométer ity dia maharitra segondra vitsy monja hampiasana anao hahafahanao mandray famakiana maromaro ao anatin'ny fotoana fohy.
8. Amplim Touchless Infrared Precision Thermometer
Vidiny: 29,98 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Mora ampiasaina amin'ny fiasa mikasika iray sy ny famakiana nomerika
Tokony ho roa santimetatra vao vakiana
Ny bateria ampidirina dia tsy kalitao tsara
Feom-bava rehefa alaina ny mari-pana fa tsy ny hovitrovitra mangina
ny Amplim Tsy misy fifandraisana Thermometer aloha miasa tsara ho an'ny olon-dehibe sy ny zaza, mamela ny famakiana haingana, mora ary koa mitahiry hatramin'ny 32 amin'ireo mari-pana farany nalaina. Azo ovaina eo anelanelan'ny C sy F izy, arakaraka izay vakiteny tianao sy fampitandremana ataon'ny bip haingana fa vita ny famakiana. Ny mari-pana dia azo alaina rehefa mitazona roa santimetatra na akaiky kokoa ilay fitaovana.
9. Tsy misy fifandraisana Thermometer Infrared Medical
Haingana sy mora ampiasaina amin'ny fikitika iray
Tsy misy fampisehoana loko mifototra amin'ny maripana
Volavola Bulkier raha oharina amin'ny maodely hafa
Tsy misy mihidy ho azy
izany Thermometer infrared tsy mifandray dia kilasy fitsaboana, marina ary haingana. Misy fampandrenesana heno rehefa tazo ny tazo, saingy tsy misy mari-pamantarana loko momba ny tazo vs. tsy misy tazo toy ny maodely sasany. Mora ny mamaky ny efijery amin'ny isa nomerika lehibe. Izy io dia miaraka amin'ny batterie, vonona hampiasaina, ary maharitra iray segondra monja hamokarana vakiteny.
10. F-Doc tsy mifandray amin'ny alàlan'ny thermometer mialoha
Vidiny: $ 39.75 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Haingana, mora ary marina. Ny iray segondra monja dia mamokatra famakiana mari-pana
Mitahiry hatramin'ny temps 32 izay azo alefa amin'ny ho avy
Volavola Bulkier raha oharina amin'ny sasany
Mora misokatra ny fanidiana bateria
ny F-Doc Thermometer mialoha ny fifandraisana mamela elanelana hatramin'ny 2.5 santimetatra hamokatra valiny marina, izay manodidina ny avo roa heny amin'ny ankamaroan'ny thermometre tsy misy mikasika ka ahafahanao mitandrina elanelana tsara. Mila iray segondra monja ilay fitaovana hamokarana famakiana, hahatonga azy io ho haingana, mora ary mahomby, indrindra raha mila maka ny maripanan'ny olona marobe ianao. Mitahiry hatramin'ny 32 temps ary manana fampiasa famonoana herinaratra ihany koa.
11. Thermometre mialoha an'ny infrared ho an'ny olon-dehibe sy zazakely
Azo ampiasaina amin'ny handrina na amin'ny sofina arakaraka ny safidinao
Tsy mamaritra hoe akaiky tokony ho aiza ianao raha hamaky marina
Tsy misy famonoana mandeha ho azy
izany Thermometre mialoha ny infrared miasa amin'ny handrina na amin'ny sofina ary mety ampiasaina amin'ny zazakely sy ny olon-dehibe. Izy io dia manana isa be, marina ary tena mora ampiasaina amin'ny scan haingana izay mamokatra famakiana ao anatin'ny iray segondra monja. Azonao atao ny manangona hatramin'ny 40 lasa ny mari-pana ary miditra amin'ny fotoana manaraka. Raha tazo ny tazo, dia hiova ny hazavan'ny backlight avy amin'ny maitso ho lasa voasary na mena, arakaraka ny hamafin'ny tazo.
Maninona ianao no tokony hividy thermometer No Touch
Rehefa miady amin'izao areti-mandringana Covid-19 izao tontolo izao dia tena zava-dehibe ny hahafahan'ny sekoly, orinasa, mpitsabo matihanina ary olon-tsotra mahazo famakiana marina ny mari-pana. Ankehitriny mihoatra ny hatramin'izay dia mila mitranga avy lavitra izany, ka mahatonga ny thermométer tsy misy tohiny ho vahaolana tonga lafatra. Marina ihany izy ireo toy ny thermometers amin'ny sofina fa tsy mila mifandray amin'ny vatana ka mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fizahana mari-pana.
Inona no mampiavaka azy amin'ny thermometer No Touch
Na dia maro aza ny thermometers tsy misy mikasika dia manana endrika mitovy amin'izany, tsy misy mitovy noforonina. Ianao dia te-hitady thermométer izay vakiana haingana, miaraka amin'ny maro afaka mamokatra hafanana ao anatin'ny iray segondra. Zava-dehibe indrindra izany raha mikasa ny handray maripana marobe amin'ny olona ao anatin'ny fotoana fohy ianao, manao izany haingana sy mora. Tokony hitady thermomèter koa ianao miaraka amin'ny tondro tazo, na amin'ny endrika fanairana na famantarana loko izay manaitra anao rehefa misy mari-pana ambony. Ny fananana thermometer tsy misy fikitika miaraka amina fanakatonana mandeha ho azy dia tsara ihany koa, hahazoana antoka fa tsy laninao maina ny bateria.
Hatraiza no ilainao ny fampiasana thermometer tsy misy kitika?
Ny ankamaroan'ny thermometre tsy misy mikasika dia azo ampiasaina amin'ny fitazonana azy 1-2 santimetatra amin'ny handrina mba hamakiana marina?
Psoriasis vs. eczema: Azonao atao ve ny mandray azy ireo amin'ny fomba mitovy?
Ny azonao antenaina amin'ny vidin'ny Medicare Part D
ny fomba fanesorana ny aretina masirasira fanafody haingana any an-trano
maharitra hafiriana ny fiasan'ny linzess noho ny fitohanana
ny fomba hahatonga ny fitohanana hiala haingana
hafiriana no maharitra ny soritr'aretin'ny serotonin
misy generic ho an'ny adderall xr